Umnikazi uzinzile kwindawo entle, imizuzu eli-10 ukuya kwisixeko sase-Örebro
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnnica & Jonas
Isitali esimangalisayo esakhiwe ngokutsha ngentlonipho (2019) ukwenza indawo eyodwa kuphela imizuzu eli-10 ukusuka eÖrebro City. Isitali sikwiBullerby idyll ejikelezwe ngamadlelo aneegusha namahashe kunye nefama ephilayo. Unendlu yakho, ipatio kunye neendawo zokupaka ezikufutshane nendlu. Ithuba layo yonke into ukusuka kwii-hangouts zasedolophini ukuya kumava amnandi endalo kwaye ungadibananga kancinci nezilwanyana kunye nobomi belizwe.
Inkonzo eyongezelelweyo: isidlo sakusasa SEK 95 / umntu, ilinen yokulala SEK 95 / umntu.
Unayo i-cottage yakho kwaye une-patio yakho apho unokufumana ikofu yakho emva kwemini okanye uhlale kwaye ujabulele incwadi enhle. Kukho kwakhona i-barbecue ukuba unqwenela ukutshisa iqhekeza lokutya ngokuhlwa (ngexesha lasehlotyeni).
Sifuna ukwenza ikhaya elineepilo ezincinci kunye neengubo ezitofotofo, indawo epholileyo eneenkcukacha, izindlu ezisebenzayo kuwe osebenzayo kunye nawe ofuna ukufumana iholide yosapho, ithuba lokufumana amava obomi basemaphandleni nakwisixeko. Indlu imalunga ne-65 sqm iyonke.
Indlu inamagumbi okulala ama-3, i-1 enebhedi ephindwe kabini, i-1 enebhedi ezi-2 zomntu oyedwa kunye negumbi lokulala eli-1 elinebhedi enye. Kukho nebhedi yesofa ye-2 pax kwigumbi lokuhlala. Kukho indlu yangasese eyahlukileyo kunye neshawari onokuthi uyisebenzise zombini ngexesha elinye.
Ezinye iindawo zikhanya kakhulu kwaye zintsha. Kukho amakhethini amnyama kuwo onke amagumbi (zombini igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala).
Kukho i-dishwasher ekhitshini ukuze ungahlambi izandla zakho :).
Ukuba unabantwana abancinci, sikwanayo nebhedi, isitulo esiphakamileyo kunye nebhedi yokuqesha i-SEK 100 / iphakheji yokuhlala yonke.
Unokufikelela kuyo yonke indlu kunye nepatio ngaphandle kwakho. Kukho ezinye izindlu ezikufutshane ezinezitiya zazo.
Singathanda ukuba uyishiye indlu ikwimeko efanayo naleyo ubuyifumene ngayo. Kukho izixhobo zokucoca ezigcweleyo endlwini. Ukuba ufuna uncedo ngokuyicoca, siya kukuvuyela ukukunceda ngayo (ukucoca okokugqibela 695 :-)
Uhlala kwindawo ephilayo yasefama apho kukho amahashe amaninzi neegusha kunye neetrektara ezinokuthi zenzeke.
I-Örebro nayo yonke i-Närke inobutyebi bemisebenzi enokunikelwa - yonke into ukusuka kubomi besixeko ukuya kwizinto zabantwana ezifana nephuli ye-adventure kaGustavsvik ukuya kuzo zonke iipaki zelizwe ezimangalisayo ezilapha njengeManntorpsskogen kunye nesigcina-ntloko esijikeleze ukukhwela ibhayisekile. Nje uqhagamshelane nathi malunga noko ufuna iingcebiso malunga kwaye siya kukuvuyela ukukunceda. Unokujonga kwakhona Ndwendwela iwebhusayithi ye-Örebro malunga nokuba kuqhubeka ntoni ngoku.
Umbuki zindwendwe ngu- Annica & Jonas
Sihlala kwenye yezindlu ezisebumelwaneni kwaye ziyafumaneka kwimibuzo njl.njl. Ukuba sinalo ixesha kunye nethuba, wamkelekile ukuba ubhukishe ukhenketho lwefama apho sinokukubonisa amatakane / iigusha kwaye uzame ukuzondla, ukukhwela itektala ukuba une abantwana abancinane, inja qabane kwaye ubone indlela i yinja xa imihlambi (oko yokusebenza ngokufuya inja).
Sihlala kwenye yezindlu ezisebumelwaneni kwaye ziyafumaneka kwimibuzo njl.njl. Ukuba sinalo ixesha kunye nethuba, wamkelekile ukuba ubhukishe ukhenketho lwefama apho sinokukubonisa…
UAnnica & Jonas yi-Superhost